Edemede Joe Andrews na Martech Zone |
Edemede site na Joe Andrews
Ka anyị na-agbago maka afọ 2019 na-aga nke ọma, otu isiokwu nke dị n'uche maka ọtụtụ ndị isi ahịa na ahịa B2B nke m kwuru okwu bụ atụmatụ ahịa ha-ahịa. Ihe ọ na-agbada maka ọtụtụ ndị isi bụ ma ụlọ ọrụ ha na-elekwasị anya na ngalaba ahịa ziri ezi yana etu ha siri dị njikere ime atụmatụ ha. Gịnị kpatara nke a? Inwe usoro siri ike ịga-ahịa nwere njikọ chiri anya na arụmọrụ enweta ego. Na nyocha ikpeazụ anyị 500